SOICARE inotonhorera mhute uye inodziya mhute aromatherapy pamusoro zadza mweya humidifier, China SOICARE inotonhorera mhute uye inodziya mhute aromatherapy pamusoro zadza mweya humidifier Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Sunpai Industries Limited
SOICARE inotonhorera mhute uye inodziya mhute aromatherapy pamusoro zadza mweya humidifier
Unodziya uye unotonhorera Humidifier, Aromatherapy, Disinfection
Kutonhorera Mhute: 18H, Warm Mist: 10H
Warm Mist: 550ml / H, Yakapora Mist:300ml / H
100000 zvidimbu pamwedzi
T / T, LC, PAYPAL, ALIBABA INShuwarenzi, PAYONEE
Iyi humidifier ine mhando mbiri dzemhute, inotonhorera mhute uye inodziya mhute.
1. Rinoshanda uye Zvimiro:
1). Yakakwira-kirasi LED kuratidza
2). Matanho matatu emhute inotonhorera uye mhute inodziya inowanikwa
3). Nguva inoshanda kubva 1h kusvika 12h
4). Humidity Kuisa kubva ku30% ~ 90%
5). Iyo humidity inogadzwa neese mashanu%. Kana humvu hwasvika pakukosha kukosha, muchina unomira kushanda. Uye kana humidity yemukati iri pazasi pekukosha kukosha kwe5%, muchina unotangazve kushanda
6). Nokunhuhwirira basa
7). Matanho maviri, mazana matatu anotenderera mabuhu
8). Dambudziko rekushomeka kwemvura
9). Chinomira kushanda kana uchisimudza tangi remvura
10). Nemamiriro ekurara
11). Iko kuratidza kwe LED kunogona kudzimwa kuti kudzikise kukanganiswa kwechiedza kurara. Pasi pekurara modhi, muchina unomira pasina inzwi kana usina mvura, iyo LED inoratidza bhatani risina mvura.
12). Remote control ndeyekusarudza
13). Wepamusoro wekuzadza patent neinosvikika mvura tangi
14). Yakakura humidifying chinzvimbo, wedzera humidity yeiyo yakazara imba zvakaenzana
15). Yemukati yakanyanya tembiricha sterilization inoita hutano hunyoro.
2. Sterilization basa rinowanikwa neAtomization & Vaporization Kusanganisa Tekinoroji
1). Shandisa iyo PTC yekudziya tekinoroji, iyo tembiricha yemvura inogona kudziirwa kusvika ku100℃ kuuraya hutachiona uye kubuda semhute inopisa.
2). Shandisa iyo Ultrasonic Transducer kuburitsa inotonhorera mhute
3). Mune flue, iyo zana ℃ inopisa mhute inosanganisa pamwe uye zvakare kuendesa kupisa kune inotonhorera mhute kuuraya hutachiona. Iyo sterilization rate inogona kusvika 99.53%. Iyo inogadzirwa inodziya mhute tembiricha iri kutenderera makumi matanhatu℃ uye yakaputirwa nefeni kumhepo yemukati.
280W (Kutonhorera mhute pa25W)
mwando hunyoro ≤95% RH, tembiricha: 5℃~45℃
Yakakwira Mistimu Vhoriyamu
Yakadzika Mistu Vhoriyamu
SP-G75 120ml Girazi Rinokosha Oiri Aromatherapy Diffuser
SP-A06 100ml Bhatiri Inoshanda diki Nzvimbo Yakachena Mafuta Anonhuhwirira Mhepo Muchina
Batanidza mafuta anokosha kufema chengetedza yakakosha mafuta eDiffuser
SOICARE inotonhorera mhute humidifier diffuser 5.5L yepamusoro zadza ultrasonic humidifier ye hypochlorous acid mvura uchishandisa